thinzar's blog: Paper Models
I think it should be in yellow color.. is that some kind of BLUE HULK? heeheeeee..
13/6/08 6:54 PM
ကလေး ကုလား အလုပ်လို့မပြောပါဘူး..လူကြီး တရုပ် လို့ပဲ ပြောတော့မယ်..အဟဲ ..ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ကျပြီး ရလာမယ့် ကလေးတွေအတွက် ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ မသွားလေပြီ...အကြံတော့ မတူလောက်ပါဘူးနော်..တီတီ :)်
16/6/08 2:56 PM
မရောက်တာကြာပြီ မသဉ္ဖာဆီကို.. :) Reader ကနေပဲ ဖတ်ဖတ်နေလို့. နောက် မသဉ္ဖာဆောင်းပါး တွေ တော်တော်များများလည်း ပြန်ရှယ်ဖြစ်တယ်လေ. အဲဒီကနေတစ်ဆင့်ပဲ။
ကလေးတုန်းကတော့ တော်တော် ကစားဖြစ်တယ်ဗျ. အဲဒီ စက္ကူရုပ်ချိုးတာလေးတွေနဲ့. နောက် နဲနဲကြီးလာတော့ ညီတွေ၊ ညီမတွေ အတွက် လုပ်ပေးဖြစ်တယ်...
အခုမသဉ္ဖာဆီမှာ ရယ်. နောက် မတူးတူးထင်တယ် ဟိုတစ်လောက ပို့စ်တစ်ပုဒ်တင်သေးတယ် အိုမီဂါရီ ကြောင်ရုပ် ခေါက်နည်းလေးတွေ...
စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲဗျာ. ဒါမျိုးဟာလေးတွေက ကလေးတွေရဲ့ Creative ဖြစ်မှုကို အများကြီး တိုးတက်လာ နိုင်စေမယ်ဗျ....
အပေါ်က တစ်ယောက်နဲ့ အကြံတူသွားပြီ.နောင် အရေးကြုံရင် သုံးဖို့ သိမ်းသွားပြီဗျာ. မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ.. :)
16/6/08 10:05 PM
ကို TZA>> :P ကာလာ မရှိလို့ အဖြူအမည်းနဲ့ ပရင့် ထုတ်ပြီး လုပ်ထားတာ။ blue ဆိုတာ ရောင်ပြန် ဟပ်နေတာ ဖြစ်မှာပါ။ white Casper နဲ့တောင် ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်သွားလား မသိဘူး။
နေလင်း>> ဦးဦးနေလင်းနဲ့ ပေါင်းမှ လူကြီး တရုတ် ဖြစ်နေပြီ။ =)
mhaw sayar>> နောင် တစ်ချိန်ချိန်မှာ အသုံးဝင်လာမှာပါ။ ;-) ဒါပေမယ် paper model က အိုရီဂါမီ နဲ့ မတူဘူး။ ဒါက နည်းနည်း ပိုပြီး လက်ဝင်သလားလို့။ စာရွက်ကို ကပ်ကျေးနဲ့ ညှပ်ရတဲ့ အဆင့်မှာတင် လျှာထွက်နေပြီ။
19/6/08 3:05 PM
Ma Thinzar.. Long time no see.. Thanks for sharing.. Those are really useful for art classes. Are you in Japan?
21/6/08 9:27 PM
apprenticeship>> yeah.. long time no see. thanks for dropping comment.. :) Nope, I'm not in Japan.
Kyaw lin>> it's fine with me :-) thanks for linking my blog..
ကျွန်တော်က Origami ဆိုတဲ့ အရုပ်ခေါက်တာကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ် Side Bar မှာလည်း Link တွေ တင်ထားသေးတယ်။
8/7/08 4:41 PM
ဟန်သစ်ငြိမ်>> origami ခေါက်တာကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားရင် paper model ကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ့်ထင်တယ်။ ဟုတ်တယ်။ ကိုဟန်သစ်ငြိမ်ဘလော့ဂ်ရဲ့ sidebar မှာ အိုရီဂါမီ လင့်ခ်တွေ တွေ့မိတယ်။ ပြီးတော့ logic puzzle link လေးတွေကိုလည်း အရမ်းကြိုက်တယ်။
8/7/08 4:48 PM